Ukuzala izimpongo | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukuzala izimpongo
Hlangana nemikhiqizo emihle yezimbuzi
Izimbuzi zahlala ezindizeni zethu zomnotho isikhathi eside. Lezi zilwane zibaluleka ngobisi, ngoba akubona wonke umuntu onethuba lokuthenga nokulondoloza inkomo, kodwa imbuzi ibheka kancane futhi ayidingi isikhala esiningi. Kodwa, njengezinkabi, izimbuzi zivela ngezindlela ezahlukene: ubisi, inyama, uboya futhi kuxutshwe.
Ukuzalwa kwezimbuzi ezi-Alpine
I-Alpine breed breed yilapho isizwe sasendulo. Kwaxoshwa emadolobheni aseSwitzerland. Sekuyisikhathi eside lezi zimbuzi zihlala emadlelweni alpine kuphela (yilapho i-etymology yegama ivela khona). Ekhulwini lama-20 leminyaka yekhulu lama-20, lolu hlobo lwasakazeka ensimini yase-Italy, eFrance nase-United States, lapho eqinisweni yathola ukuthandwa kwayo.
I-Lamancha - uhlobo lwezimbuzi zobisi
Ekuqaleni kwekhulwini lama-20, kusukela esifundazweni saseLa Mancha - eSpain, izimbuzi ezincane ezifakwe e-Mexico zalethwa eMexico. Kakade ngo-1930, bahlala e-United States, e-Oregon. Eminyakeni elandelayo, abalimi baqala ukusebenza ngenhloso yokuletha izinhlobo ezintsha zobisi. Ngesikhathi sokuwela kwezimbuzi ezimfushane ezinamaSwitzerland, amaNubiya nezinye izinhlobo, ososayensi bathola izinhlobo ezintsha ezihlukile, okuthiwa yiLa Mancha.
Izimbuzi zokubeletha ngenhloso yokuthola ubisi akuyona umsebenzi owuthandwa kakhulu ezindaweni zethu zokuhlala, okuyinhloko ngokuyinhloko ngenxa yokusabalalisa okuphansi kwezihlobo ezinika ukukhiqiza ubisi obuningi. Kodwa-ke, ngokuhamba kwesikhathi, ukuthuthukiswa kwentuthuko yesayensi nezobuchwepheshe kanye nokuhlanganiswa kwezinhlelo ezihlukahlukene zezindlela zokulima ezitholwa emazweni ahlukene, abalimi ngabanamuhla baqala ukuthola ithuba lokuhlukanisa imfuyo yabo, kuhlanganise nezimbuzi, ezikhishwe kahle futhi zikhishwa kakhulu.
Ukuzalwa kwezimbuzi zaseNubian: izici zokugcina ekhaya
Izimpondo ze-Nubian zingakhiqiza kuze kube ngu-ton of ubisi ngonyaka, ngakho-ke lolu hlobo lubaluleke kakhulu phakathi kwemikhakha yembuzi. Ngisho nomuntu owazi kahle kakhulu angamgcina. Into eyinhloko ukwazi izici zokondliwa kanye nokudla kwesilwane. Ake sijwayelane nohlobo oluseduze. Umlando wemvelaphi Lezi zizukulwane zakhiwe ngabakhiqizi baseNgilandi, okuvela kuwo igama elisemthethweni - izimbuzi zase-Anglo-Nubian.
Imbuzi yezimbuzi zohlobo lwe-Saanen
Ummeleli obaluleke kunawo wonke wezimbuzi ezivela emikhiqizweni ephakeme yelisi yiSwitzerland yaseSwiten, indawo yokuzalwa yidolobha laseZaanen, elise-Alps. Isilwane sihluke kwezinye izimbuzi ekukhiqizeni okuphezulu, ukuzala okuhle nokuzivumelanisa kahle nezimo zezulu ezibuhlungu.
Ama-mini mini aseCameroon: ukugcinwa nokunakekelwa ekhaya
Izilwane ezifuywayo azizona kuphela izakhamuzi zezilwane. Abalimi baye badala isikhathi eside futhi benza ngempumelelo izilwane ezinjalo ngezinhloso ezihlukahlukene: njengezilwane ezifuywayo, ezokuvakasha kwezolimo, njll. Kulesi sibuyekezo, sizogxila ezimbuzini ezincane zaseCameroon kanye nezici zazo. Ulwazi olujwayelekile Ulwazi lwe-compact Cameroon luye lwasakazeka emhlabeni jikelele eminyakeni emakhulu edlule.
Imikhiqizo engcono kakhulu yezimbuzi zobisi: izindlela zokunakekelwa nokugcinwa
Namuhla, ukubeletha kwezimbuzi ezindlini zasendlini kuyathandwa kakhulu kunangaphambili. Futhi lapho kuvela izinhlobo ezintsha zanamuhla ezihloswe ngezinhloso ezithile, ukuthola ubisi, inyama, uboya, nokucabangela ubukhulu obuncane besilwane, ngisho nokuqala abalimi bezimbuzi, ngokulandela imithetho elula yokugcina, bayothola ekuchumeni ngobunempilo nobisi lwezimbuzi ze-hypoallergenic.